सपनामा यौ’नसम्पर्क गरेको देखे के हुन्छ ? हेर्नुस यस्ता संकेत देखे यस्तो हुन्छ जीवनमा Sapana | Public 24Khabar
Home Horoscope सपनामा यौ’नसम्पर्क गरेको देखे के हुन्छ ? हेर्नुस यस्ता संकेत देखे यस्तो...
सपनामा यौ’नसम्पर्क गरेको देखे के हुन्छ ? हेर्नुस यस्ता संकेत देखे यस्तो हुन्छ जीवनमा Sapana
सपनामा यौ’नसम्पर्क गरेको देखे के हुन्छ ? हेर्नुस यस्ता संकेत देखे यस्तो हुन्छ जीवनमा Sapana .
सन् २०२२ को डा’इभर्सिटी भिसा (डीभी) कार्यक्रम खुला गरिएको छ । डीभीका लागि आवेदन दर्ता अवधि बुधबार, अक्टोबर ७, २०२० देखि सुरु हुने गरी डीभी खुला भएको छ । उक्त अवधि मंगलबार, नोभेम्बर १०, २०२० मा बन्द हुनेछ ।इच्छुक आवेदकका लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी :- आवेदन नि:शुल्क डीभी कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि शुल्क लाग्दैन ।- .
कन्सल्टेन्टको आवश्यकता नपर्ने : अमेरिकी दूतावास तपाईंहरुलाई आवेदन भर्दा कन्सल्टेन्टको सहयोग नलिन सल्लाह दिन्छ । आ’वेदनसम्बन्धी सहयोग चाहिएमा परिवारको सदस्य, साथी वा अन्य विश्‍वासिलो व्यक्तिको सहयोग लिनेतर्फ विचार गर्नुहोला ।
Previous articleदशैं अगाडि लकडाउन ? ठक कि बेठीक ?
Next articleभाग्यमानी मान्छेले मात्रै देख्ने जिउँदो दाहिने शंखफोटोमा छोएर ॐ लेखी दर्शन गर्नुहोस